Umhla My Pet » Yintoni Twitter Ngaba kunifundisa Malunga Love?
ngokuthi Nidhi Mathew
Yintoni Twitter Ngaba kunifundisa Malunga Love?
Kule mihla, webhsayithi zentlalo, mhlawumbi iindawo apho abantu bachitha ixesha elininzi xa bakhululekile.
Nangona iyinyaniso ezidla ixesha elichithwa eendaba zentlalo kungaphela abe engento bonke chitchats zingenasihlahla kwaye bahleba, maxa wambi abantu baphela ukufunda izinto ezininzi umdla nebalulekileyo kwezi websites. Njengokuba, kukho amaphepha womnatha zoluntu ezinikela iiresiphi ezintsha kunye ezintsha, amaphepha kukufundisa abantu zakutshanje fashoni, kwaye nangokunjalo.
ngelo xesha, kukho ezinye izifundo umntu ukufunda nje ngokuba umsebenzisi rhoqo kwiwebhsayithi; ngezantsi ezinye izifundo uthando site micro-kubloga Twitter ifundisa.
1. Uthando kuphela ngo kuhlala kunye:
Esi sifundo enye Miley uKoreshi wasinika esebenzisa Twitter ngexesha nahlukene wakhe awayethandana Justin Gaston ngoFebruwari, 2011. Evakalisa nahlukene kwisiza micro-kubloga, UKoreshi wathi uthando lokwenene asinakuba nesiphelo bonwabe uthando lokwenene awuze uphele.
Inkwenkwezi owayesakuba uthotho zikamabonakude kaHanna Montana wongezelela ukuba kukuyeka yenye indlela yokubonakalisa uthando. Esi sifundo uthando omkhulu kubo bonke, umfana okanye omdala.
Ukuba umntu omthandayo, kufuneka uyazi ukuba njani him / her aye. Ukuba umntu akafuni ukuqhubeka uthando okanye abe nawe, umele ungaze ufuna ukumenza / kuye kwenza ukuba uyichaza; oku kungenxa Ukuba nithanda ukuba umntu, ngokuqinisekileyo uya kufuna ukumbona / onwabe.
2. Kukho izinto ezithile ukuba umxelela xa ukuchitha ixesha kunye neqabane lakho:
Kutshanje kukho tag asa komzila on Twitter eyandincedayo abantu ukuqokelela ulwazi ngezinto akufunekanga athi ngomhla. Ithegi hashe uya njengalo: #FiveWordsToRuinADate.
Abasebenzisi ngeposi inani ayeneengcebiso malunga lamagama kunokulonakalisa umhla. Ezinye zezo iingcebiso ba bemele ngokwenene ukukhumbula.
Njengokuba, Mat Lieberman, ngubani umkhosi AfterBuzz TV, wabhala ukuba ngokutsho kuye amazwi emihlanu kunokulonakalisa umhla na “ukuba amange ufana nomzala wam”. Yintoni Lieberman wayefuna ukuthetha oko impazamo enkulu ukuthetha ubudlelwane zakho ngaphambili phambi uthando lwakho olutsha.
Omnye umzekelo we tweet ngokuthi Jeff Drake, umbhali. Amazwi ezintlanu enga, njengoko kuye, zezi “umama wam kusigxotha”. Le ngxelo inokuba spoilsport enkulu ukuba awenze xa ukuchitha ixesha kunye neqabane lakho, ingakumbi ukuba ngaba mfo.
Ewe, ngokuqinisekileyo unelungelo umthande umama wakho, kodwa uninzi amantombazana sikuthiyile ukubona umntu ebomini babo ekuziseni yesalathiso ye umama wabo okanye ukuthetha gqitha ngaye.
Ngenisa #FiveWordsToRuinADate asa tag phezu Twitter bar search; uya kufumana ukubona amacebiso amaninzi umdla neluncedo ezifana.
3. zinto zincinane kwenza imisebenzi ebalulekileyo:
Uthando ngezinto ezincinane; kwii Iingxoxo ubuncinane on Twitter cebisa. Njengokuba, i weposi yi Patama Izithuba icebisa ukuba amantombazana nimthande amava endanga ngasemva.
Ezi zinto zincinane ezenza iqabane azive ethandwa kwaye Twitter usifundisa abaninzi kubo.
umphezulu 5 US Cities for Men Single
Wazi njani ukuba wena Ukhoyo Love?
5 Iindlela Yokufumana Uthando Ubomi Bakho!